Zanu PF heads for special Congress – Nehanda Radio
By Nehanda Radio On Oct 15, 2017 12,641
The other six provinces will hold their executive council meetings today to determine whether the party should convene an Extraordinary Congress or a scheduled Annual National People’s Conference.
While calling for an Extraordinary Congress yesterday, Mashonaland West, Midlands, Bulawayo and Matabeleland South affirmed President Mugabe, as the ruling party’s candidate in next year’s Presidential election, despite the frail 93-year-old leader struggling to walk or remember dates.
May 12, 2022 39,050
Zanu-PF National Secretary for Administration Dr Ignatius Chombo said: “In the last three months we have been approached as a party by members from various quarters wondering if we should hold the Extraordinary Congress to prepare for next year’s harmonised national elections.
At the Mashonaland West PEC, officials endorsed the Extraordinary Congress and affirmed President Mugabe as the party’s 2018 Presidential candidate. Dr Chombo said the Mashonaland West Provincial Coordinating Committee, which met after the PEC, had also endorsed the two resolutions.
Zanu-PF Mashonaland East PCC member Simbaneuta Mudarikwa said: “We have been invited for the meetings tomorrow and I am going to attend.” The Sunday Mail
Robert MugabeZanu PFZanu PF conferenceZanu PF CongressZanu PF infighting
Too soon to forget Tongai Moyo
Grace Mugabe to be VP in December….. plot to succeed husband in the event of death
May 16, 2022 69,905